पक्राउ परेका ‘गोरे’ को मानसिनक सन्तुलन गुम्न थाल्यो, एक्लै बोल्छन तर के बोल्छन ?::Pathivara News
अमेरिकामा बस्दै आउनुभएका एक बौद्धिक कलाकार पवन ओलीले ल्याए १० बर्ष पछि ऐतिहासिक दोहोरी गीत -हेर्नुहोस चीन–अमेरिका विवादले जारी भएन घोषणापत्र तत्काल एकता गर्न तीन राप्रपाका २० नेताहरुले दिए दबाब नेपालका थप २५ स्थानमा केबुलकार निर्माण प्रस्ताव, यी ठाउँमा बन्दैछन केबुलकार म्याग्दीमा यसरी वित्दैछ प्रचण्ड-बादलको ७२ घण्टा
पक्राउ परेका ‘गोरे’ को मानसिनक सन्तुलन गुम्न थाल्यो, एक्लै बोल्छन तर के बोल्छन ?
काठमाडौं – ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्याका मुख्य अभियुक्त चुडामणि उप्रेती ‘गोरे’ मानसिनक सन्तुलन गुमाउने अबस्थामा पुगेका छन्। गोरेमाथि हाल केन्द्रीय कारागार सुन्धाराको गोलघर भित्र राखेर अनुसन्धान भइरहेको छ। उनी आजभोली गोलघर भित्र एक्लै बोलिरहने, बरबराउने एक थरी कुरा सोध्यो अर्कै थरी कुरा गर्ने गरेको सुन्धारा कारागार स्रोतले जनाएको छ।
स्रोतका अनुसार उनलाई हाल नियमित सुन्धारा कारागार भित्रै रहेको अस्पतालमा मानसिक चेक गराउन सुरु गरिएको छ। अस्पतालका मानसिक रोगका डाक्टर कृष्ण गौतमका अनुसार गोरे तनावका कारण एक्लै बरबराउन थालेका हुन्। मानसिक अवस्था सन्तुलनमै रहेको उनको भनाई छ। ‘हामी गोरेलाई नियमित चेक गरिरहेका छौं तनाव नहुने र निद्रा लाग्ने औषधी दिन खोज्दा तनावले हो। म कन्ट्रोल गर्छु भनेर गोरेले औषधी खान मानेन्,’ गौतमले भने।
३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या अभियोगका ३३ जनालाई मोरङ जिल्ला अदालतले पुर्पक्षकालागि जेल चलान गरेको थियो। मोरङ कारागारमा राखिएका गोरे सहित छिरिङ वाङ्गेल घले र भुजुङ गुरुङलाई सम्पति शुद्धीकरण अायोगले जेठ २८ मा काठमाडौं ल्याएको थियो। गोरे जेठ ८ गते पक्राउ परेका थिए। घले र गुरुङलाई सुन्धारा कारागारको गोलघर बाहिरै राखिएको छ भने गोरेलाई भने गोलघर भित्र राखिएको छ। गोलघर भित्र गोरेलगायत अन्य कुख्यात अपराध गरेका ६ जना रहेका छन्।
माघ ९ गते तस्करीको ३३ किलो सुन हराएपछि सनम शाक्यको हत्या भएको थियो। सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्याको हाल गृहमन्त्रालयका सह सचिव ईश्वरीराज पौडेल नेतृत्वको छानविन समितिले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
केशव स्थापितलाई हटाउनुको भित्रि कारण खुलाए मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले
अमेरिकामा बस्दै आउनुभएका एक बौद्धिक कलाकार पवन ओलीले ल्याए १० बर्ष पछि ऐतिहासिक दोहोरी गीत -हेर्नुहोस
गरिवको जिन्दगी र मनको पीर लोकदोहरी गीति एल्बम बजारमा ल्याएर चर्चाको शिखरमा पुगेका लोकप्रिय लोक तथा दोहरी गायक पवन ओलीले करिब दश वर्ष पछी...
तत्काल एकता गर्न तीन राप्रपाका २० नेताहरुले दिए दबाब
नेपालका थप २५ स्थानमा केबुलकार निर्माण प्रस्ताव, यी ठाउँमा बन्दैछन केबुलकार
म्याग्दीमा यसरी वित्दैछ प्रचण्ड-बादलको ७२ घण्टा
रमेश बिजुली बिसीको निर्देशन तथा शोनु बिकको छायांँकन रहेको हरीना साउद र लालु रैकालको सुमधुर स्वरमा “साली माद्दि सिट्टी” देउडा गीतको भिडियो सार्वजनिक